Yakanakisa Offshore Banking Institutions uye Anotonga
Yakanakisa Offshore Banking Mitambo
Offshore Banking Masimba Akanyorwa MuOdhi
Heino rondedzero yezvakanakisa uye zvakanyanya kukurudzirwa offshore banking kutonga. Neraki, isu takaita research yakawandisa. Naizvozvo, tinogona kupa matipi uye zano kuti basa rako rive nyore. Nekudaro, nyika idzi dzine mitemo inopa kuchengetedzeka kwemari, kuvanzika, kuita nyore uye kupa kudzoka kwekukwikwidza pakuita mari.
Pakutanga mari yekutanga ye $ 250,000:
OffshoreCompany.com inoshanda muakaundi mubhangi muSwitzerland nedzimwe nzvimbo dzakanaka. Saka, ndapota zadza fomu rekutaurirana kana kushandisa imwe yefoni nhamba pane ino peji. Mukuwedzera, iwe unogona kushanyira chikamu chedu chose pane Swiss Banking.
Nekuisa pasi pasi pe $ 250,000, heino mazano akakurudzirwa:
Carribean (nyika zhinji - dana foni nhamba iri pamusoro kuti uwane)
Carribean uye Belize (ona mutsvuku pasi pemitsara)
Munyika dzisina mutero, kufungidzira kwekuvhura account kwakaderera. Kune rimwe divi, kuvanzika kuri pamusoro. Munharaunda yekutonga kweEurope, zvisinei hazvo kune zvibvumirano zvinowedzera izvo zvinofanirwa kushambadzira zvinodiwa kumabhangi nhengo. Saka, vangangove varidzi veakaunzi vanofanirwa kuburitsa yakawedzera kuziva-yako-mutengi zvinyorwa. Vakadana chibvumirano ichi kuti European Union Savings tax Directive 2005.
Zvino, munaDecember 2014, Council yeEuropean Union yakatora Directive 2014 / 107 / EU. Izvi zvinopa kushandira pamwe kwebhanga / hurumende pazvinhu zvemutero ("EU Mutual Rubatsiro Dhiri"). Saka, mabhangi anoshuma akawana mubereko uye migove, pamwewo neimwe depositor mari. Kubudikidza nahwo, nyika dzinopindirana ruzivo rweutero nedzimwe nyika.
Iyi mirayiridzo ingakanganisa kuvanzika kwebhangi mune dzimwe nyika dziri pasi payo. Uye zvakare, iyo EU Mutero Directive inogona kudzikamisa kuvanzika uye kuvanzika kwevanoisa mari mumabhangi ekunze. Kuti zvive zvakajeka, izvi zvinoshanda chete kumabhangi ari munzvimbo dzakatarwa dziri pasi pemirau iyi.
Nyika dziri pasi peEU Banking Directive
Sezvakanyorwa izvi, nhengo dzenhengo dzeEuropean Union dzinotevera:
Austria, Belgium, Kupro, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, uye United Kingdom. Kunze kwenyika dzeEU, rairo yacho inosanganisirawo zvibvumirano pakati peEU neAndorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, neSwitzerland.
Chero kutonga kwese uko kuri chikamu chemubatanidzwa kuri pasi peiyo EU Mutero Directive. Pamusoro pezvo, chero nyika dziri pasi pekutonga kwe, kana mutumiriri wemarudzi aya zvakare. Vamwe vanogona kuitawo nemwoyo unoda, seSwitzerland neUnited States.
Yakatemerwa zvakapusa, 2014 chibvumirano pakati peEU Nhengo dzeUnited States pamwe chete nerondedzero yenyika dziri pedyo. Izvo, zvakananga, inobvumira kuchinjana kwemari kana ruzivo rwekuchinjana ruzivo. EU inodaidza chibvumirano ichi se "otomatiki chirevo chemashoko ruzivo" uye ndicho chiratidzo cheiyo Directive.
Iyo Offshore masimba ayo asiri pasi pemitemo yeEU kana mirayiridzo haatori muchibvumirano ichi. Nekudaro, ivo vanokwanisa vanoisa kune avo anotonga akawedzera mwero wekuvanzika.
Mamwe Mabhengi Ekutonga
Kune mamwe akawanda masimba akatarisana nemhenderekedzo yegungwa anopa zvakawanda zvakanaka zvakafanana izvo zvinoitika zveEU shanduro. Asi ivo havana kusungwa kune EU Directive. Pasina mubvunzo kutaura, izvi zvinowanzo fungwa zvakanyanya kufunga kune mushambadzi kana depositor anotsvaga pekuvanzika. Izvi zvinokonzerwa nekuti iwe ungade kubatsirwa chaiyo iyo yekutonga kusangana neEU Direkta yekushuma hakugone kusangana. Chokwadi, uku kufunga kwakakosha. Nekudaro, iwe haufanire kufungidzira kuti zvinowanzobatsira zvakanyanya kubhangi mune isiri-EU Directive adhering kutonga.
Ngatitii munhu angangoisa depositor anozosangana neyekutanga dhipiro rehuwandu. Ane zvinangwa zvake zvebhengi mukuwirirana pamwe nebhanga rake uye nemasimba kwaro. Nekudaro, nzvimbo dziri kumahombekombe dzakadai seSwitzerland dzinogona kugarisana naye zvakanaka. Nekudaro, kune masimba ane hunyanzvi zvikuru asiri pasi peiyo EU Mutero Directive. Vanogona kunge vaine zvekutanga zvekuisa muhomwe zvakaderera zvakanyanya kudarika izvo zveiyo "yakatangwa" kutonga. Semuenzaniso, mamwe masimba akaita seSt Vincent neBelize anogona kuda zvishoma seUS $ 2000 US kutanga.
Banking Yachinja Sei
Pamberi pekuputika kweintaneti kwepakati-90's uye 9 / 11 kurwisa kwehugandanga, nyika yebhangi yakanga iri nyore. Semuenzaniso, varidzi veakaunzi uye vangangove vakaisa mumabhangi ekunze vaifanira kufamba mubhangi. Izvi zvaidikanwa kuitira kuvhura account. Neimwe nzira, ivo vangangotumira mumiriri ane mvumo kuti vadaro. Vaifanira kumisikidza maakaundi, mari yemichero, kana kuisa zvibvumirano mumunhu. Iyo yekare "kiyi bhokisi uye kiyi" nzira yakatonga yakakwirira.
Nekudaro, kubvira pakati-90's, kwave nekuchinja kukuru. Pave paine kuputika kwechokwadi muhunyanzvi hwekutanga uhwo husinga fungidzirwe mumaindasitiri mazhinji ebasa pasi rese. Izvi zvechokwadi zvinosanganisira offshore banking.
Huye mazuva ekuti unofanirwa kunyatsofamba mubhangi. Iye zvino, mazhinji emasevhisi ari padyo nekhibhodi yako yepedyo. Sezvaunoziva, ikozvino tine pasi rose webhu kuwana maakaunti. Isu tine zvakare kadhi rechikwereti semakadhi ekubhengi uye kuuya kwezvinhu zvemagetsi zvinopihwa. Zvakare, kune edu zvigunwe ari chaiwo masiginecha, uye iyo isingaite isina kukwana kune internet. Nekudaro, bhangi rekune dzimwe nyika rakashandurwa kuti rive mhinduro iri nyore kune vanhu nemakambani.
Izvo hazvina basa kana yako bhangi iri Grand Canyon nyika kana Grand Cayman. Zvizhinji zvezvimiro izvo zvinopihwa nemabhangi ingori kubaya mbeva. Ngatifungei kuti unosangana uye unonamatira kune ese ekudzivirira uye unongoita zviitiko zvepamutemo. Kana zvirizvo, kuvanzika kwechero dhipoziti kana kudyara kwakachengeteka sezvaakamboita.
Kuwedzerwa Offshore Banking Information
Offshore bank accounts shanda nenzira imwecheteyo seyakajairika bank account. Iro bhengi rinovhura account. Ipapo, mutengi anogamuchira kadhi kubhengi kadhi kadhi kana kadhi rechikwereti. Depositors vane pamhepo kuwana. Kuita zvekuchinjiswa ne waya uye kuitisa yakajairika yekubhengi account kutumira zviri nyore. Ingo pinda muinternet uye tevera mirairo. Offshore mabhangi anopa akawanda akafanana yakareruka uye akawanda anopa kwakakura vatengi basa. Paunosarudza yako institution zvakakosha kuti usarudze iyo inopa iyo ndiyo yakakodzera yako mamiriro.
Sezvakataurwa, mazhinji emahombekombe ekubhangi mabheji anokutendera iwe kuti uise account yebhangi nekuisa zvishoma seUS $ 2000. Mune zvimwe zviitiko, zvichienderana nebhangi, iwe unogona kuisa zvishoma. Zvakare, vese vanokurudzirwa ekune mamwe mabheti bank account vanogadziriswa zvakanyanya uye vanoomerera kune yakasimba mitemo yenyika dzekuvanzika. Akaundi maakaundi kazhinji anoda yakakwirira yekutanga dhipoziti. Nekudaro izvo zvinokwenenzverwa zvichienderana nezvinowanikwa muaccount account nezvirongwa.
OffshoreCompany.com inotsvaga iyo yemari masevhisi masevhisi kupota pasi. Tine chokwadi chekuti vatengi vedu vanokwanisa kuwana maakaunti avo kuburikidza nefoni, fakisi, email neInternet. Uyezve, tinoita nepatinogona napo kuti vave nechokwadi chekuti ivo vanoteerera kune izvo zvevatengi vedu. Uyezve tinoda kuva nechokwadi chekuti takangwara uye zvakavanzika.
Kazhinji, bhizimusi rako rebhangi remahombekombe richawana mhindu. Iwe unogona zvakare kukumbira isu kuseta account yekudyara kwemhiri kwemhiri. Iyo inofarira uye yekudyara mibairo inowanzo kuve yemitero yemunharaunda mune bhangi kutonga. Iyo mibairo yemari inowanzo kuve yakakwira uye iyo mibairo inokwikwidza. Mazhinji makambani 500 emakambani, kusanganisira makambani emafuta anotora mukana kubva kubhangi rekune dzimwe nyika. Mamwe emamwe mutero akakurumbira kune vatongi vane mazana emari yekutanga mabhengi kusarudza.
Masangano emari mumatunhu akasununguka haataure ruzivo rwevatengi kuhurumende dzekunze. Ivo havambozvitaure ivo pachavo. Saka zviri pamubati weakaunti kuti zviite. Sekambani inoshanda, hongu, tinokurudzira kuti uite maererano ne mutero Mitemo yesimba iyo iwe unosungirwa. Nyika zhinji, kusanganisira mutero weUS mupasi rose mari. Saka, kutanga tinokubatsira iwe kutanga yako kambani uye account. Zvadaro, isu tine maCPA ane ruzivo rwakanyanya izvo uye anogona kubatsira pakuteverwa kwemitero kune yako yepasi rese mari.
OffshoreCompany.com inovhura zviuru zvebhizinesi zvimisikidzwa, bhangi account, kuvanzika uye asset kuchengetedzwa zvirongwa pasi rese. Kuchengetedza uye kukura mari yevatengi vedu ndizvo zvinhu zvedu zvakanyanya kunetsa.
Offshore banking institution inopa akasiyana siyana mabhenefiti, kana zvasvika pakavanzika Switzerland yakaoma kurova. Isu takapa chikamu chakakwana pa Swiss banking uko unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pebhengi rebhangi.
To chitsauko 12>